အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ﻿နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား( ၂၀၀ဂ)နှစ်ထောင် မကြာမီလွှတ် ပေးမည် (ရုပ်သံ)
﻿နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား( ၂၀၀ဂ)နှစ်ထောင် မကြာမီလွှတ် ပေးမည် (ရုပ်သံ)
နော်ဝေနိုင်ငံမှ အစိုးရအဖွဲ့ ဝင် ၀န်ကြီး (Espen Barth Eide) အက်စ်ဘတ်အီဒဲ -သည် ၇။၁၀။ ၂၀၁၁ နေ့ က မြန်မာ အစိုးရ၏ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းနှင့် နေပြည်တော်တွင် သွားရောက် တွေ့ ဆုံခဲ့သည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံစဉ် ဦးရွှေမန်းမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင်များမကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား(၂၀၀ဂ) နှစ်ထောင် လွှတ် ပေးမည်ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်ကို နော်ဝေရုပ်မြင်သံကြား ဌာန တခု ဖြစ်သည့် .nrk မှ ပြသသွားသည်။
ဦးရွှေ မန်းမှ မြန်မာလို အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးမည်ကို နော်ဝေ ၀န်ကြီးမှ နားမလည်သဖြင့် ပြန်လည်မေးမြန်းရာ -မကြာမီ ရက်ပိုင်း အတွင်း ပေါ့ ။အကောင်အထည်ဖော်မှာ ပါဟု ပြန်လည်ဖြေကြားရာ အင်္ဂလိပ် စကားပြန်မှ withinafew days ဟု ပြန်ပြောပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နိုင်ငံရေးအရကြို ဆိုပါမည်လား ဟု ထပ်မံမေးမြန်းရာတွင် -- ရှိနိုင်ဖို့ အခွင့် အလမ်းတွေ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲလို ပေါ်လာမယ်ဆိုရင်လည်း မိမိတို့  ဘက်မှ ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ကြိုဆိုမည်ဖြေစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါသည်။ သတင်း။ ။ဟစ်တိုင်
မူရင်း။။ နော်ဝေ သတင်း.
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 10:35 PM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook